नेपाली सेलिब्रेटीले कसरी मनाउँदै छन् तिहार ? | Butwal Dainik
आज: २०७९ जेष्ठ १०, मंगलबार
संक्रमित देशबाट नेपाल आउनेलाई २ हप्ता क्वारेन्टिन अनिवार्य, कुन-कुन देशमा छ त संक्रमण ? (जानकारी का लागि सेयर गराै)
बुटवलमा एमालेको गण भत्काउने को हुन् खेलराज पाण्डे ?
रिहानको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै ग्रान्डी अस्पताललाई ३५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने अदालतको फैसला
यी सेलिब्रिटीहरुप्रति ‘पीडित’ युवतीको आक्रोश, माल्भिकाको पक्षमा बोलेको भन्दै…..हेर्नुहाेस् पूरा जानकारी
चाबहिलस्थित शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित
अचम्म: आफ्नो भाेट पनि हरायाे, एक भोट पनि नआए पछि अदालतमा मुद्धा हाल्दै यी उमेदवार !
एमालेकि नवनिर्वाचित मेयर अर्यालले ख्वाइन राजकिय शैलीमा सपथ, सोहिदिन सुरुभयो तुरिया खोलाको चिर हरण
दलित भएकै कारण न्याय पाइएन, छाेरिकाे अवस्था पता लगाउन अधिकारकर्मी गुहार्द‌ै पिडित
हात-खुट्टा नभएका एकान्तमा बस्दै आएका अनौठो जोडी-जसलाई भाग्यले मात्र ठगेन (भिडियो हे`र्नुस्)
कति हुन्छ वडा सदस्यदेखि महानगरका मेयरको तलब ? (सूचिसहित)
कुटपिट गरी हत्या पश्चात शव खोलामा फाली फरार रहेका व्यक्तीहरु पक्राउ
बालेनको लौरोले टाउकोमै हिर्काएपछि बाहिरियो नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा, दियो नसोचेको प्रतिक्रिया
काठमाडौंको मेयरको मतपरिणामा तहल्का मच्चाइरहेका बालेन साहको संसदमा पनि भयो ईन्ट्री, सांसदहरुको गयो सातो
होमपेज / आर्टिस्ट खबर
नेपाली सेलिब्रेटीले कसरी मनाउँदै छन् तिहार ?
२०७८ कार्तिक २०, शनिबार (६ महिना अघि)
४८१ पटक पढिएको
काठमाडौं : नेपालीको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार सुरु भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा यसपालि परिस्थिति अलि सहज भएकाले जनमानसमा उत्साह पलाएको छ ।आमसर्वसाधारणझँै फिल्म तथा संगीत क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरू पनि विशेष तवरले तिहार मनाउने गर्दछन् ।
यसपालिको तिहार कुन सेलिब्रेटीले कसरी मनाउँदैछन् ? उनीहरूको योजना के छन् त ? यसबारेमा न्युज कारखानाका लक्ष्मण सुवेदीले तयार पारेको एक रिपोर्ट ः
यसपालि देउसी खेल्न जाने मन छ
भुवन केसी, अभिनेता
यसपालि अलि रौनक छ । चाडपर्व आएजस्तो लागेको छ । तर, पनि सावधानी भने अपनाउनुपर्छ । घरमा देउसीभैलो खेल्न आउनेहरूसँग नाचगान गर्न र उनीहरूले दिएको आशिष् लिन बडो आनन्द लाग्छ । मैले आफैँ देउसीभैलो नखेलेको त वर्षाँै भयो । नजिकका साथीहरू मिले भने यसपालि चाहिँ देउसी खेल्न जान मन लागेको छ । हेरौं, माहौल कस्तो बन्छ ।
मेरी एउटी बहिनी छे, ऊसँग टीका लगाउँछु । घरमा सबैजना भेला हुन्छौँ । त्यो निकै रमाइलो पक्ष हो । तिहारपछि ‘पारस’ फिल्मको सुटिङ गर्ने योजना छ । त्यसको तयारी पनि चलिरहेको छ । संसारभरका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तिहारको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
काठमाडौंमै मेरो भाइटीका
रेखा थापा, अभिनेत्री
यसपालि कोरानाभाइरस संक्रमण घट्दै गएकाले अघिल्लो वर्षको भन्दा जनजीवन सामान्य हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले यसपालि तिहार अलि खुलेर मनाउन पाइँदै छ । तर, पनि हामीले सजकता भने अपनाउनै पर्छ । मलाई रंगोली बनाउन आउँदैन । यसपालि लक्ष्मीपूजामा ‘ट्राइ’ गर्छु । मम्मीसँग मिलेर सेल पकाउने, घरमा बत्ती लगाउने, फूलहरू सजाउने गर्छु ।
मलाई देउसीभैलो खेलेको हेर्न बडो आनन्द लाग्छ । सानोमा त खुब खेल्थेँ । अचेल त हेर्न रमाइलो लाग्छ । यसपालिको भाइटीका पनि काठमाडौंमै मनाउँछु । मेरा दुई जना दाइ हुनुहुन्छ, विराटनगरबाट एक जना दाइ टीका लगाउन आउनु हुन्छ । मैले टीका लगाउने गरेका कतिपय दाइभाइहरू बाहिर छन् । त्यसैले यसपालि सबैसँग टीका हुन्न होला ।
दीपाश्री निरौला, निर्देशक
तिहारको झिलिमिली मलाई एकदम मनपर्छ । काग, कुुकुर, लक्ष्मीदेखि लिएर भाइसम्मको पूजा गर्न पाइने पर्व एकदम गजब लाग्छ मलाई । यसपालि भने खुलेरै तिहार मनाउने प्लान छ । त्यसका लागि म मूलघर विराटनगर जादै छु । दाजुभाइलाई टीका लगाएर, मागेर आशीर्वाद लिन्छु । सेल पकाउने, घर झिलिमिली बनाउने, घरमा देउसीभैलो खेल्न आएकाहरूसँग नाच्ने, नचाउने, निकै रमाइलो लाग्छ ।
सानोमा त देउसीभैलो भट्याउन आफैँ हिड्ने गर्थें । रातभरि भैली खेलेर जम्मा भएको पैसा र चामल लिएर घर नजिकै वनभोज खान जान्थ्यौँ । निकै रमाइलो हुन्थ्यो बच्चा बेलाको तिहार । सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु ।
सुटिङमै मनाइन्छ तिहार
दयाहाङ राई, अभिनेता
उज्यालोको पर्व तिहार मलाई बडो रमाइलो लाग्छ । कोरोनाका कारण गत वर्ष चाडपर्व मनाउने माहौल थिएन । तर, यसपालि स्थिति सहज हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले दसैँलगतै ‘कबड्डी–४’ सुटिङ सुरु भयो । अहिले म सुटिङका क्रममा मुस्ताङमा छु । मेरो तिहार सुटिङ मै बित्छ ।
यसपालि मेरो भाइटीका छैन । तर, पनि खाइपिइ रमाइलो चाहिँ गरिन्छ । देउसीभैलो रातिमा खेल्न रमाइलो हुन्छ । यहाँ सुटिङमा भाइहरू देउसी खेल्ने प्लान बनाइरहेका छन् । यहाँ एकदम जाडो छ । त्यसैले म चाहिँ आराम गर्छु होला ।
तिहारमा आफैँ घर सफा गर्छु
जीतु नेपाल, हाँस्य कलाकार
गत वर्षभन्दा यसपालि जनजीवन अलि सहज छ । त्यसैले अलि खुलेर चाडपर्व मनाउन पाइएको छ । मलाई तिहार विशेष मनपर्ने पर्व हो । अरु बेलामा जसोतसो चलिहाल्छ, तिहारमा भने घर सफा पार्ने काम आफैँ गर्छु । झ्याल, ढोकामा झिलिमिली बत्ती बाल्ने, फूलहरूले सजाउने, देउसी भैलो खेल्न आउनेलाई दक्षिणा दिन बडो रमाइलो हुन्छ ।
पहिला नरेफाँटमा बस्दा, त्यहाँ वरपरको सबैजना मिलेर एउटा गुठी टाइपको बनाएका थियौँ । हरेक वर्षको तिहारमा हामीहरू त्यहीँबाट तीन चार घण्टा देउसीभैलो खेल्ने गरेका छौँ । यसपालि पनि देउसी खेलिन्छ । हामी छ जना दाजुभाइकी एक दिदी र एक बहिनी छिन्, उनीहरूबाट टीका लगाएर आशीर्वाद लिन्छु ।
साथीभाइका कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छु
राजेशपायल राई, गायक
तिहार मलाई मनपर्ने पर्व हो । सधैँ भागदौडको जिन्दगीमा चाडपर्वमा घरपरिवार, आफन्तसँग भेट्घाट गर्न पाइन्छ । त्यसमाथि तिहारमा जताततै झिलिमिली बत्ती, फूलहरू र सेलको सुगन्ध, वातावरण बडो रमाइलो लाग्छ । मेरो दसैँतिहार प्रायःजसो विदेशमा बित्ने गरेको छ । यसपालि भने घरमै मनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ । तर, फुपुका कारण यसपटक मेरो भाइटीका छैन ।
टीका नभए पनि म साथीभाइले आयोजना गर्ने तिहारजन्य कार्यक्रमहरूमा भने उपस्थिति हुन्छु । अरु बेलामा काममै व्यस्त भइन्छ । तिहारको बेलामा भने साथीभाइहरूसँग सम्बन्ध ‘रिन्यू’ गर्ने अवसर पाइन्छ ।
वर्कसपले गर्दा योजना बनाउन पाएको छैन
पुष्प खड्का, अभिनेता
तिहार रमाइलोसँग मनाउने मन छ । तर, के–के गर्ने भन्ने योजना बनाउन पाएको छैन । अचेल म फेब्रुअरीमा सुटिङ हुने ‘एक्स–९’ फिल्मको वर्कसपमा व्यस्त छु । त्यसैले अरु कुराहरू सोच्न पाएको छैन ।
बहिनी यतै छिन्, त्यसैले यसपालि काठमाडौमै तिहार मनाउँछु । देउसीभैलो खेल्ने चाहना त छ । तर, भ्याइएलाजस्तो लागेको छैन । साथीभाइ, परिवारसँग बसेर खाइपिइ गर्दै तिहार मनाउनु पर्ला ।
वर्षा सिवाकोटी, अभिनेत्री
चाडपर्वमध्येमा तिहार सबैभन्दा रमाइलो लाग्छ । बत्तीको झिलिमिली, फूलहरूको सुगन्ध, पशुपन्छीसमेतलाई पूजा गर्ने पर्वको महत्व नै बेग्लै छ । तिहार म धुमधामसँग मनाउने गर्दछु । यसपालि पनि देउसीभैलो खेल्न आउनेहरूसँग नाच्ने, भाइटीका लगाउने योजना छ । गत बर्ष कोरोना संक्रमणको त्रासले खासै खुलेर पर्वहरू मनाउन पाइएन । यसपालि भने वातावरण सामान्य बन्दै गइरहेकाले मन खुसी छ ।
आर्टिस्ट खबर सम्बन्धि थप
भत्कियो पल र दुर्गेशको सम्बन्ध!
प्रिज्मा–प्रिन्सी छाडेर स्मारिका–समारिकातिर
म भिखारी हो भने त दलाल होस् भन्दै जंगीए जयकिशन बस्नेत
यिनै हुन् गायक राजेशपायल राई माथी हमला गर्ने व्यक्ती, आखिर किन गरे त राई माथि आक्रमण
म कामी हो, मेरो जातमा मलाई गर्व छ। अरुले के भन्छन मलाइ कुनै मतलव छैन।